Bangladesh: Mahatsiaro ny Voalohan’ny volana Mey ny Blaogy Bangla · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh: Mahatsiaro ny Voalohan'ny volana Mey ny Blaogy Bangla
Voadika ny 09 Mey 2008 8:42 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, македонски, Shqip, English
Tamin'ity herinandro ity, ny blogy Bangla eran-tany dia niraondraona tamin'ny andrana sy fandalinana manodidina ny 1 Mey, ankalazaina eran-tany ho toy ny andron'ny mpiasa eran'izao tontolo izao sy andron'ny asa.
Be ny fahadisoam-panantenana teny anivon'ireo mpitoraka blaogy izay nanindry fa angamba efa very, navalon'ny fotoana, ny foto-kevitra marina nijoroan'ity andro ity, ka dia noraisina fotsiny ho toy ny andro iray fialan-tsasatra sisa. Araka ny hevitr'i Zukrufa, betsaka amin'ireo mpampiasa no manohana am-bava fotsiny ny fahatsiarovana ny Voalohan'ny volana Mey amin'ny fikarakarana fikaonan-doha (seminera), fihaonana ara-panatanjahantena na lahatsoratra anaty gazetiboky momba ny raharaha ary maneho nofinofy mandrenoka ireo mpiasa momba izay ho endriky ny fiainan-ko aviny. Kanefa, ireo mpampiasa ireo ihany no tsy nitondra fiovana mivaingana noho ny fanaovan'ny rafitra tsindry hazolena ireo mpiasa sy ny fandavana ny zo fototra mendrika tokony ho azony.
Syed Amiruzzaman mahita azy ity ho toy ny fandrebirebena hitazonana ny sarangan'ny mpiasa ho ao anatin'ny tsy fahalalana mba hahafahana manararaotra azy ireo, tsy avy amin'ny mpampiasa fotsiny, fa koa avy amin'ireo antoko politika sy ireo mpitarika sendika. Ao amin'ny Amader Kotha (Ny tantarantsika), blaogy Bangla iray ao amin'ny tetikasa Narijibon ao Bangladesh (mpanohana ny Rising Voices), Aysha Khatun no manoratra milaza fa na dia amin'izao fotoana aza ireo mpiasa amin'ireo orinasa anatin'ny sehatry ny fanenoman-damba ao Bangladesh dia iharan'ny tsindry hazolena mafy tokoa amin'ny tsy maintsy hiasana mandritry ny 12 ora raha kely indrindra nefa sandan-karama 8 ora monja no raisiny amin'izany. Ankoatr'izay, ireo mpiasa ireo, hoy hatrany izy amintsika, dia miasa andro fety ary inoana fa niasa koa ny Voalohan'ny volana Mey.
Kowshik Ahmed no manamarika ny olana sedrain'ny mpiasa amin'ny sehatra maro ary mametraka fanontaniana momba ny zon'izy ireo sy ny ‘ fiarovana ny asa’. Ny mpitoraka blaogy Suman Chowdhury anefa dia mahita fanantenana ary milaza fa misy ny fanararaotana amin'ny lafiny ilany, amin'ny lafiny iray kosa misy ilay foto-pisainana tsy mety folahana ananan'ny sarangan'ny mpiasa sy ny finiavana hanohitra foana ary hahazo rariny. Manainga ny tokony hisian'ny firaisankinan'ny mpiasa erantany izy.
Tantaran'ny Bangladesh farany
3 herinandro izayAzia Atsimo
4 herinandro izayAzia Atsimo
25 Avrily 2021Azia Atsimo